Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny serivisy manatsara ny lalao
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny serivisy manatsara ny lalao
Ahoana ny fiasan'ny lalao?
Amin'ny fitenin'olona laika, ny fampiroboroboana ny lalao dia ny fanampiana mpilalao ambany laharana amin'ny traikefa, loharano ary fahalalana rehetra hahafahany miloka tsara noho ny fifaninanana amin'ny fifaninanana mpilalao marobe.
Misy fomba isan-karazany hanatanterahana ny fanamafisana ny lalao. Miady hevitra momba ny fomba mahazatra, dia mitaky mpilalao ambany laharana hiara-hiasa amin'ny mpilalao hafa manana laharana sy fampisehoana tsara kokoa.
Raha ara-teknika dia mitondra ny fotoam-pilalaovanao miaraka amin'ny olona afaka manome toky anao handresy ianao amin'ny talenta miavaka ananany. Na dia tsy zavatra azo antoka aza izany dia mbola manana vintana tsara sy avo kokoa noho ny teo aloha ianao hitakiana izany fandresena izany.
Amin'ny alàlan'ny fitakiana ireo fandresena ireo izay mampiroborobo ny lalao, azon'ny mpilalao atao ny mametraka tanana an'ireo voninahitra efa nandrasana hatry ny ela tamin'ny lalao ankafiziny. Tokony holazaintsika eto fa ny lalao sasany dia manome laharana sy anaram-boninahitra, fa ny hafa kosa manome valisoa.
Na eo aza izany, raha mitady ireo lalao manatsara sy mitondra serivisy ireo dia mila mitandrina hatrany amin'ireo mpilalao sandoka rehetra. Tsy fantatrao mihitsy hoe rahoviana tokoa no misy mamitaka anao nefa manome toky lehibe.
Ny fomba faharoa amin'ny serivisy fanamafisana ny lalao dia ny fiatrehana ny lalao amin'ny lafiny roa. Amin'ity fomba ity, ekipa fanamafisana ambony, fa tsy mpilalao tokana ihany no hikarakara ny roa tonta. Noho izany, azontsika atao ny milaza fa ny ankolafy finamanana sy ny fahavalo dia karakarain'ny ekipa mpanatsara ny lalao.
Raha misy olona manao an'izany hahazoana tombony dia afaka manangona tombony lehibe ho an'ny rehetra io fomba io. Satria mpilalao marobe no mampiasa ny serivisy indray mandeha, dia mety hitondra tombony ara-bola tsara ho an'ny orinasa manatsara ny lalao izany.
Mbola hita ihany anefa ny fomba. Satria maro ny olona no very indray mandeha, dia mety hiteraka karazana ahiahy sasany ao an-tsain'ny mpilalao izany.
Farany nefa tsy farany, ny fomba Pay 2 Win na fifanakalozana bitika noforonin'ireo mpamorona lalao sy mpanonta dia mahazo ny lazany rehetra ankehitriny. Amin'ny ankabeazan'ny fotoana, ireto ekipa ireto dia manolotra bonus be dia be ho an'ireo mpilalao vonona hamoaka vola sasany hahazoana ambaratonga, traikefa sns.